एउटा 'गुमनाम कायर'ले लेख्ने ब्लगमा आचारसंहिता लगाउने कुरा, मनको लड्डु घिऊसंग खाए झै हुनेछ-ब्लगरदाई - MeroReport
एउटा 'गुमनाम कायर'ले लेख्ने ब्लगमा आचारसंहिता लगाउने कुरा, मनको लड्डु घिऊसंग खाए झै हुनेछ-ब्लगरदाई
हेटौँडाका नविन मालाकारलाई सोसल मिडियाका प्रयोगकर्ताहरु उनको सक्कली परिचयले भन्दापनि ब्लगरदाईका नामले बढी चिन्छन् । आफूलाई विज्ञानको विद्यार्थी बताउने नविनले भौतिकशास्त्रमा पिएचडी सकेर हाल अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बैज्ञानिक सोधहरु गर्दैछन् । Artificial Intelligence, Remote Sensing, Data Analysis इत्यादिको सेरोफेरोमा पिएचडी गरेका उनको ब्लग भने सबैखाले बिषयहरु अट्ने थलो हो । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरका रुपमा हामीसंग कुराकानी गर्दै गर्दा उनले भने-' बिज्ञानलाई समाजसंग जोड्ने प्रयत्न गर्दैछु भन्दा अत्युक्ति नहोला ।' प्रस्तुत छ ब्लगरदाई उर्फ नविन मालाकारसंगको कुराकानी:
एउटा समय थियो ब्लग र Academy अलग-अलग राख्ने भनेर प्रयास गरियो । तर सम्भव भएन वा जानिएन । त्यसैले "give up and declare victory" को अवस्था छ । एउटा बिज्ञानको बिद्यार्थी हुँ र ब्लगिग गर्दैछु भनेर चिनाउन पाउदा गौरब नै लाग्छ ।
तपाँईको ब्लग http://www.nabinkm.com/ को बारेमा थोरै शब्दचित्र प्रस्तुत गरिदिनुस् न । मेरो ब्लग समय दिएर बाँध्न नभ्याईएको बाँध जस्तो छ । त्यसमाथी खासै बाधिएर लेख्ने बानी छैन। "यो मेरो प्रस्थान बिंदु हो" भन्ने हिसाबले frame of reference को नाम जुरेको हो। Physics पढ्दै गरेको बिद्यार्थीको खेस्रा हो जसमा बिषय बाहिरका रहरलाग्दा संसारिक कुराहरु टिपोतित छन ।
blogspot लाई Google ले किन्नुअघि, रहरले एउटा (free) ब्लग खोलेको थिए । तर खुला अनियमित डायरी जस्तो । याहूको 360 मा केहि समय बिताएपछि 2006 तिर फेरी ब्लगरमा आईयो । ब्लग खोल्नुअघि साथीहरुलाई इमेल गरेर, नत्र कपीमा कोरेर पढ्न दिने गर्थे, यात्रा संस्मरण देखि कथा-हाईकु जे पनि । सम्झिदा रमाईलो लाग्छ : मेरो लेख पढ्नेले पछाडिको पन्नामा आफ्नो नाम सहि छाप गर्नुपर्थ्यो ब्लग खोलेपछि साथीहरु लाई राहत भो होला !
एउटा hobby को रुपमा, यो मनचिन्ते झोला बिसाउन । दिनभर अर्काको कुरा सुन्यो/पढ्यो, मनमा अनेक थरिका तरंगहरु उत्पन्न भैरहेका हुन्छन, राम्रा/नराम्रा: तिनीहरुलाई कैद नगर्ने हो भने तुरुन्तै बिलीन हुन्छन । त्यस्तै थुप्रै काम लाग्ने link हरु संगाल्न पनि ब्लगिङ राम्रो साधन भएको छ ।
nabinkm.com मा बिशेष गरेर Educational type को information संकलन गर्न खोजिएको हो तर व्यस्तताले ब्लग खानै आँट्यो! आफ्नै research का टुक्रा-टाक्री राख्ने पहल पनी हुदैछ । अजबगजब ब्लग (ajabgajab.blogspot.com) technology लगायतका सामान्य टिपोट हुन् । तर अचेल ब्ल्ग्नु अघि "के यो कुरो भन्नै पर्छ? मैले नै भन्नु पर्छ र?" भन्ने प्रश्नको उत्तर आएन भने draft मा थुप्रिन्छन ।
तपाईंको ब्लगमा अलिक प्राविधिक कुराहरु धेरै रहेछन् र भाषा पनि अँग्रेजी रहेछ । आफ्नो ब्लग कसलाई लक्षित गरेर लेख्नुहुन्छ, बताईदिनुस् न?
छोटो उपलब्ध समयमा नेपाली भाषामा लेख्ने दुस्साहस गर्न सकिन । भन्नुपर्ने कुरो छिटो टाईप गर्न अंग्रेजीमा सजिलो, फेरी सबै उल्था गरिरहने समयाभाव हुने भएकोले त्यसो हुन गयो । बास्तवमा भन्नुपर्दा nabinkm.com फिजिक्स पढ्ने भाइ-बहिनीहरुलाई जानकारी पाउन सजिलो होस् भन्ने विचारले सुरु गरेको थिए । त्यसैले पनि भाषा समस्या हैन माध्यम मात्र ठहरियो । (म त्यतिबेला ajabgajab.blogspot.com मा active थिए ) नेपाल मा Physics पढ्दै गरेका भाइहरुसंग यसैले गर्दा थुप्रै नयाँ सम्बन्ध बनाएको छु र साथै पुरानो सम्बन्ध जोड्न मद्दत पनि गरेको छ (mostly)
यस बाहेक तपाँइको अर्को रुचीको बिषय चाँही के हो ब्लगिङ गर्नका लागि?
नेपाली भाषामा छोटो टुक्का लेख्ने "खै-के?" भन्ने ब्लग छ । त्यसमा देखेको-सुनेको समसामयिक कुराहरु माथि नोट गर्छु । यी सबै नोटहरु मार्कचाको फेसबुक मा पेज बनाएर syndicate गरेको छु ।
ब्लग चर्चित हुनका लागि बिषय, नेटवर्क र यसको साजसज्जाले पनि निकै ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ भन्छन् जानकारहरु । तपाँईका केही टिप्सहरु छन् भने भनिदिनुस न, राम्रो ब्लग कसरी बन्छ?
सबै भन्दा ठुलो त बिषयवस्तु (content) नै हो । एउटा ध्रुब समातेर मज्जाले लेख्नुस, मानिसहरु खोजीखोजी आउछन । बिशेष त धैर्यता राख्नुपर्छ, Research गर्नुपर्छ र नियमित हुनुपर्छ | Blog ले audience pick up गर्न जति गारो छ, maintain गर्न उत्तिकै गारो छ। नेटवर्क भयो भने रेगुलर कस्टमर त् आउछन, तर स्तरीय content नहुने हो भने अर्को पल्ट आउने ग्यारेन्टी हुन्न । त्यस्तै साजसज्जाको बारेमा भन्नुपर्दा: चितवन भएर गुड्ने night-bus जस्तो धेरै झिलिमिली (gif/ java scripts) साजसज्जा भन्दा सादा (minimal CSS) ब्लगले पाठकलाई न्याय गर्छ ।
मेरो ब्लगको कमेन्ट फोन, इमेलबाट आइपुग्छ ।
०. नेपाल छोड्दाको संस्मरण यात्राले राम्रो प्रतिकृया पाएको थियो (2006/7) मा । कतिले त्यो पढेर भाव विव्हल भएँ भने ।
१. nabinkm.com लाई physics पढ्ने साथी भाईहरुको बिशेष माया छ ।
२. Physicist-ब्लगर भनेर थाहा पाए पछि खोज्दै-खोज्दै एक ठाउमा बिशेष अतिथिको आमन्त्रण आएको थियो (Entropy in paintings) ३. त्यस्तै पेपर review गरेको बैज्ञानिकले पनि इमेलमा धन्यवाद दिएका थिए ।
नेपाली ब्लग/सोसल मेडिया समाजको दर्पण हो । हाम्रो समाजमा भएको राम्रो नराम्रो दुवै कुरो यसमा पराबर्तित हुन्छ ।
म त सर्जक भन्दा बढी पाठक नै हु । त्यसैले प्रतिक्रिया प्राय: कमै हुन्छन । नेपाली ब्लगसंगको लगावले गर्दा नै आफुले पढ्ने ब्लगहरुको लिस्ट बनाएर पढ्ने गर्छु (जस्तै: hamro-circle मा updated सबै जसो blog visit गर्छु। http://www.hamrocircle.blogspot.com)।
समयले साथ दिदा त सबै पढ्छु । Google Reader ले काईदा गर्या थियो । अब त्यो गयो । तैपनि digg reader छ धन्न ! Technology, सटिक (राजनीतिक/समसामयिक) टिप्पणी, यात्रा संस्मरण, इत्यादि मेरा बिशेष रुचि हुन् |
सम्पादक बिनाको प्रकाशन कतिपय मित्रहरुलाई कहालिलाग्दो कुरो लाग्दो रहेछ । प्रकाशन र अन्तरक्रियाको तरिका आजको दिनमा हिजोको भन्दा फरक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ, र यो भोलिको दिनमा अझ फरक ढंगले आउनेछ । आचारसंहिताको कुरो पत्रकारिता र ब्लग दुवै डुंगामा खुट्टा राख्नेहरुलाई लागु हुन्छ । तर एउटा शिक्षित ब्यक्तिले आत्म सम्पादन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । एउटा "गुमनाम कायर" (anonymous coward) ले लेख्ने कुरोमा आचारसंहिता लगाउनेकुरो मनको लड्डु घिऊ संग खाएको दिनमा लागु हुनेछ । जरुरी भन्दा पनि सम्भव छैन । अर्को कुरो नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै/नयाँ आचारसंहिता चाहिन्न । यता हेर्नुहोला : http://en.wikipedia.org/wiki/Blogger's_Code_of_Conduct ।
सुरू सुरुमा एउटा "गुमनाम कायर" (anonymous coward) भएर लेख्ने क्रममा हाकिमले पत्ता लगाएको घटना रमाईलो थियो। त्यो लेख कुनै ब्यक्ति भन्दा पनि प्रवृति माथिको व्यंग थियो । तै तै उ पनि मेरै समर्थक रहेछ !!!
प्रकट गर्ने जमात र audience target फरक-फरक देखे । बास्तवमा फेसबुक/ट्विटरका स्टाटस पनि एक किसिमका ब्लग नै हुन् । हिजो एक हरफ नलेख्ने-अन्तर्मुखी राते आज फेसबुकमा राम्रा-राम्रा फोटो शेयर गर्छन । प्रकट गर्ने माध्यम मात्र फरक भएको हो । यसको सुन्दरता बर्णन गरिसाध्य छैन तर मैले कतिलाई ब्लगको उकालो चढेर, बतास खान ट्विटरको खोला धाएको देखेको छु । राम राम!
सामाजिक हित वा सामाजिक मुद्दामा लेखिएको ब्लग औंलामा गन्न मिल्छ । धेरै जसो short-term issue मा आधारित छन । त्येस्तै कुनै पनि ध्रुव नसमाती लेख्ने मान्छे पाउनै गाह्रो ! लेबल लागि हाल्ने ! तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ @tfcnepal जस्तो संस्था एउटा उदाहरण हो । निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
यी दुईले सोचे भन्दा धेरै नै visitor पाएछ्न (~17k): http://www.nabinkm.com/2012/12/blog-post.html http://www.nabinkm.com/2012/06/blog-post.html
धेरै नयाँ मित्र बनाएँ ।
यसमा मेरो बिमति छ । नागरिक पत्रकारिता भनेको नागरिक पत्रकारिता नै हो, ब्लग होइन । संयोगबस संकलित सुचनालाई नागरिक पत्रकारिता भन्न मिल्ला तर कुनै मान्छेले आफ्नो मोबाईलमा कुनै घटना नियमित रुपमा संकलन गर्न थाल्छ भने त्यो पत्रकारिता हुन्छ तर ब्लगको दायरा त्यो भन्दा निकै फराकिलो छ । रिपोर्टिंग त्यसको लक्ष हुदैन बाई-प्रोडक्ट हुनसक्ला । यो अस्पस्टताको कारण "ब्रेकिङ्ग न्युज" को होडबाजी हो । ब्लगको सजीवता audience को रुचि भन्दा लेखकको स्वतन्त्रताले संचालित हुन्छ ।
मेरो रिपोर्टको प्रयासको म पहिले देखि ठुलो फ्यान हुँ ! यो उत्साह र शक्ति सधै कायम रहोस् ।